Maalinba maalinta ka dambaysa, Kaniisada Dunida ee Switzerland (WKG)
Mar labaad iyo marar badan, Ilaah wuxuu kula hadlay awowayaasheen siyaabo kaladuwan nebiyadii hore xitaa waagii hore. Laakiin hadda, waayadan dambe, Ilaah wuxuu nagula hadlay wiilkiisa. Isaga isagaa abuuray xaggiisa cirka iyo dhulka, isaguna isagaa u adeegsaday waxkasta oo dhaxlaya. Wiilku wuxuu muujinayaa ammaanta aabihiis, maxaa yeelay isagu guud ahaanba waa aragtida Ilaah (Waraaq u socota Cibraaniyada 1,1: 3 HFA). Saynisyahannada bulshada ayaa adeegsada ereyo sida ...
Kaniisadda ayaa ah jidhkiisa oo isagu ku dhex noolaada iyada oo dhan. Waa kan wax kasta iyo qof walba hortiisa buuxiya (Efesos 1:23). Sanadkii la soo dhaafay waxaan xasuustay kuwii bixiyay waxtarka ugu weyn intii lagu jiray dagaalka si loo hubiyo jiritaankeena qaran ahaan. Xusuusnadu waa wanaagsan tahay. Xaqiiqdii, waxay umuuqataa inay tahay mid ka mid ah ereyada Ilaah ugu jecel yahay maxaa yeelay marar badan ayuu u adeegsadaa. Wuxuu had iyo jeer ina xusuusiyaa in aan ka warhayno xididdada iyo ...
“Laakiin waxaa ku dhex jirtay beero meeshii isaga iskutallaabta lagu qodbay iyo goob cusub oo beerta ku jirtay oo aan weligeed ninna la dhigin” Yooxanaa 19:41. Waqtiyo badan oo muhiim ah oo taariikhda Baybalka ah ayaa ka dhacay goobo u muuqda kuwo ka turjumaya nooca dhacdooyinka. Daqiiqada ugu horeysa ee noocan oo kale ah waxay ka dhacday beerta quruxda badan ee Ilaah dejiyey Aadan iyo Xaawa. Dabcan, Beerta Ceeden waxay ahayd mid gaar ah maxaa yeelay waxay ahayd ilaahay ...
"Runtii waa nimco saafi ah in lagaa badbaadiyo. Adiga naftaada waxba ma qaban kartid laakiin adoo kalsooni ku qaba waxa Ilaah ku siinayo. Wax ku kasbaday maahan inaad wax qabato; maxaa yeelay Ilaah ma doonayo in qofna u tilmaami karo wixii uu sameeyey wixii isaga ka horreeyey ”(Efesos 2,8-9 GN). Bawlos wuxuu qoray: “Jacaylku xumaan kuma sameeyo deriskiisa; sidaas aawadeed jacaylkii sharciga waa dhammaaday. (Rom 13,10 Zurich Bible). Waxaa xiiso leh in aan ka ...
Sababtoo ah Wankayaga Kormariddayada ayaa nala gowracay: Masiix. (1 Korintos 5,7: 4000). Ma dooneynno inaan iska indhatirno dhacdo weyn oo ka dhacday Masar ku dhawaad ​​2 sano kahor markii Ilaah ka xoreeyay Israa'iil addoonsiga. Toban belaayo, oo lagu qeexay Baxniintii, ayaa lagama maarmaan u ahaa in la ruxruxo Fircoon caasinimadiisa, kibirkiisa, iyo caasinnimada Ilaah. Iiddii Kormaridda waxay ahayd belaayadii u dambaysay uguna dambaysay ...
Qof walba si filaan ayuu kuu eegayaa waxaadna siisaa cunno waqti ku habboon. Gacantaadaad furi doontaa, oo waxaad dhergi doontaa abuurkiinna ... ”(Sabuurradii 145, 15-16 HFA). Mararka qaar waxaan dareemaa gaajo qaylinaya meel gudaha ah oo qoto dheer. Fikradayda waxaan isku dayaa inaan iska iloobo oo aan xakameeyo muddo. Laakiin si lama filaan ah ayuu mar kale u soo ifbaxaa. Waxaan ka hadlayaa rabitaanka, rabitaanka inaga dhex jira si aan si fiican u fahamno qoto dheer, qaylada ...
"Maxaa yeelay isaga qudhiisu wuxuu yidhi:" Runtii anigu ma doonayo inaan gacantayda kaa qaado, dhab ahaanna ma doonayo inaan kaa tago "(Cibraaniga 13, 5 ZUB). Maxaan qabannaa haddii aanaannaan jidkeenna arki karin? Suuragal maahan suurtagal in nolosha la maro iyada oo aan jirin walwal iyo dhibaatooyin nolosha la imanaya. Mararka qaarkood kuwan way adag tahay in loo dulqaato. Nolosha, waxay umuuqataa, inay tahay mid ku meel gaadh ah cadaalad daro. Maxay sidaa u tahay? Waxaan jeclaan laheyn inaan ogaano taas. Waxbadan lamafilaan ah ...
Waan ku sii waday gacmaha. Laakiin reer binu Israa'iil ma ay ogayn in wax kasta oo wanaagsan oo iyaga ku dhacay ay xagga xagayga ka yimaadeen ”(Hoosheeca 11: 3 HFA). Markii aan baarayay kiiskeyga aaladda, waxaan ku arkay xirmooyin sigaar oo duug ah, laga yaabee 60-yadii. Waa la jaray si markaas meesha ugu badan ee suuragalka ah loo abuuray. Waxaa jiray sawir gacmeed ku xiraya seddex-tilmaame iyo tilmaamo sida loo diro. Yaa ...
Goortaad tukanaysid, ha iskudaybin erayo been ah sida kuwa aan Ilaah aaminka ahayn, waxay moodayaan in la maqli doono haddii ay erayo badan ku hadlaan. ka hor intaadan weydiin "(Mt 6,7-8 NGÜ). Qof baa mar weydiiyay, "Maxaan ugu baryaa Ilaah, isagoo og wax kasta?" Ciise wuxuu sameeyay bayaanka kor ku xusan sidii hordhac u ah Baryada Rabbi. Eebbe waa ogyahay wax walba. Ruuxiisu meelwalba ayuu joogaa ...
"Sidaa darteed, walaalayaal quduus ah, oo ku wadaaga yeedhitaanka jannada, fiiri rasuulka iyo wadaadka sare ee aan qiranay, Ciise Masiix" (Cibraaniyada 3: 1). Dadka badankood waxay aqbalaan in Kirismasku uu noqday meel buuq badan, oo xaflad ganacsi ah - in kastoo Ciise caadiyan gabi ahaanba la ilaaway. Adkeynta waxaa la saaraa cuntada, khamriga, hadiyadaha iyo dabaaldegyada; laakiin maxaa loo dabaaldegaa? Masiixiyiin ahaan, waa inaan ka fikirno sababta uu Eebbe u yahay ...
Runtii waa nimco saafi ah in lagaa badbaadiyey. Adiga naftaada waxba ma qaban kartid laakiin adoo kalsooni ku qaba waxa Ilaah ku siinayo. Wax ku kasbaday maahan inaad wax qabato; maxaa yeelay Ilaah ma doonayo in qofna isku halleeyo wixii uu isagu hortiisii ​​qabtay (Efesos 2,8–9 GN). Waa wax la yaab leh markaynu Masiixiyiintu baranno fahamka nimcada! Fahankaasi wuxuu meesha ka saarayaa cadaadiska iyo culeyska aan inta badan nafteenna saarayno. Waxay naga dhigeysaa ...